Imandarmedia.com.np: किन हेरिन्छ सेक्स भिडियो ? नेपालमा को-को ले हेर्छन् ?
Lifestyle » किन हेरिन्छ सेक्स भिडियो ? नेपालमा को-को ले हेर्छन् ?
पछिल्लो समय यौन शिक्षाको विषयमा चासो बढ्दै गइरहेको छ । प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा पनि पछिल्लो समय अनलाईनमा पोर्न भिडियो हेर्नेको संख्या बढेको छ । यौन सम्बन्ध र व्यवहारिक विज्ञान विशेषज्ञका अनुसार सेक्स एउटा यस्तो समस्या होे, जसलाई लिएर किशोरहरुमा धेरै जान्ने इच्छा हुन्छ ।